coroner ကယောဘဖျေါပွခကျြ Template ကို – JobDescriptionSample.org
နေအိမ် / လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် / coroner ကယောဘဖျေါပွခကျြ Template ကို
coroner ကယောဘဖျေါပွခကျြ Template ကို
စူပါအဒ်မင် ဇွန်လ 18, 2016 လုပ်ငန်းတာဝန်သတ်မှတ်ချက် 1 မှတ်ချက် 628 views
လြှပျစစျအင်ဂျင်နီယာယောဘကိုဖျေါပွခကျြ Template ကို
ဇွန်လ 18, 2016
အနုမြူစောင့်ကြည့် Technician ယောဘကိုဖျေါပွခကျြနမူနာ
ရောဂါဗေဒနှင့် toxicological ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအပါအဝင်ချက်ချင်းလှုပ်ရှားမှုများ, သူသခှေဲစိတျခွငျး, ပင်သေဆုံးသို့မဟုတ်နောက်ကွယ်ကအကြောင်းရင်းထွက်ရှာရန်ဥပဒေရေးရာဥပဒေပြဌာန်းအတွင်း၌ဖြစ်ပေါ်သေဆုံးမှု၏သုတေသနကိုရည်မှတ်စစ်မေးခြင်းနှင့် ပတ်သက်. တာဝန်ယူမှုပြင်ပေးဖို့, ပြင်းထန်သော, မရည်ရွယ်သောဖြစ်ကြောင်းသို့မဟုတ် unexplained သေဆုံးခဲ့ပြီး.
medicolegal အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်သူသခှေဲစိတျခွငျးဖွစျမွောကျစိတ်ထိခိုက်၏အချက်ပြမှုများကိုဖေါ်ထုတ်, နှင့်သေခြင်း၏ကာလအကြံပြုနိုင်ကြောင်းရှုထောငျ့ရှာဖွေတွေ့ရှိ.
မောင်းဖို့အတွက်ကိုမေး, နည်းလမ်း, နှင့်လူသေဆုံးမှု၏အခွအေနမြေားနှင့်သေကြောင်းကိုတစ်ဦးချင်းစီ၏အထောက်အထားတွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်.
ကြည့်ရှုခြင်း, အစီရင်ခံစာ, နှင့်သေဆုံးမှုမှတစ်ဦးချင်းစီဆက်စပ်ကြောင်းမည်သည့်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်, ထိုကဲ့သို့သောဆေးသေတ္တာကလေးနှင့်အဗဒ္ဒုန်မှတ်တမ်းများအဖြစ်တ္ထုများအပါအဝင်.
အချိန်လေးသေဆုံးရာမှကိန်းဂဏန်းများကုသပပျောက်သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်, မှန်ကန်သောကိရိယာများနှင့်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြု., နှင့်တောင်းဆိုမှုကိုနယ်လှည့်.
အသုံးဝင်သောအချက်အလက်များသေဆုံးနေ၏လမ်းဆုံးဖြတ်ခြင်းအတွက်ရရှိရန်အသေခံ display တွေမှာလက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ဆုံ.
စစ်မေးခြင်းမှာကိုအတည်ပြု, ကြားနာ, တရားသူကြီးစမ်းသပ်မှုတွေ.
သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းရှေးရှေးမှပုဂ္ဂလိကသက်ရောက်မှုများပစ်လွှတ် Coordinate နှင့်သည့်အရေးမဆိုထားသောအလောင်းတွေနှင့်ပုဂ္ဂလိကသက်ရောက်မှုကူညီမည်’ စိတ်ထား.
အမြဲတမ်းဒေတာနှင့် ပတ်သက်. စာရွက်စာတမ်းများစီစဉ်န်ထမ်းများ၏တိုက်ရိုက်လုပ်ရပ်များ, ရောဂါဗေဒနှင့် toxicological ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖျော်ဖြေ, နှင့်သူသခှေဲစိတျခွငျးဖျော်ဖြေ.
အခြားအ-လူတွေကအပြည့်အဝအာရုံစိုက်မှုရာပူဇော်သက္ကာကိုအခိုင်အမာအဘယ်အရာကို active-နားထောင်ခြင်း-ရန်, ထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည့်အချက်များနားမလည်ဖို့အချိန်နှင့်စွမ်းအင်လာပြီ, သင့်လျော်သောအဖြစ်မေးခွန်းတွေမေး, အစားလက်မခံနိုင်အခါသမယမှာကြားဖြတ်ထက်.
နှစ်ဦးစလုံးသည်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အနာဂတ်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. တက်ကြွစွာသင်ယူခြင်း-အသိပညာလတ်ဆတ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ရဲ့အရေးပါမှုနဲ့.
မဟာဗျူဟာ-ရွေးချယ်ခြင်းသင်ယူခြင်းနှင့်လတ်ဆတ်သောပစ္စည်းများကိုကျွမ်းကျင်သို့မဟုတ်ညွှန်ကြားချက်တဲ့အခါမှာညာဘက်ပြဿနာများအတွက် trainingANDeducational နည်းစနစ်များနှင့်နည်းလမ်းများအလုပ်သမား.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး-TrackingANDEvaluating စွမ်းဆောင်ရည်ကို, အပိုဆောင်းတစ်ဦးချင်းစီ, သို့မဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်မှန်ကန်သောလုပ်ရပ်များယူသို့မဟုတ်တိုးမြှင့်မှုများထုတ်လုပ်ရန်.
လူမှုအခြားသူများကိုသတိထားအမြင်-ဖြစ်ခြင်း’ သူတို့လုပျနေချိန်တွင်သူတို့ reply ဘယ်ကြောင့်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အသိပညာ.
အခြားသူများစပ်လျဉ်း Dexter-မွမ်းမံလုပ်ရပ်များ’ အစီအမံ.
ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာရှုပ်ထွေးဒုက္ခခွဲခြား-ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များပြန်လည်သုံးသပ်ဆန်းစစ်နဲ့ options ထုတ်လုပ်ရန်နှင့်အခြားနည်းလမ်းအကောင်အထည်ဖော်ရန်.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသုတေသန-ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်ထုတ်ကုန်လိုအပ်ချက်တစ်ခု layout ကိုအောင်.
ပစ္စည်းကိရိယာရွေးချယ်ရေး-ကိုစူးစမ်းရေးကိရိယာများနှင့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း execute ဖို့လိုအပ်ပစ္စည်းကိရိယာများရဲ့ type ကို.
အရစ်ကျ-Installing မော်ဒယ်များ, ဂီယာ, ဝါယာကြိုး, အင်ျဂါရကျေနပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အစီအစဉ်များ.
မြောက်မြားစွာ applications များနှင့်စပ်လျဉ်း coding-ထုတ်လုပ်ကွန်ပျူတာ packages များ.
စစ်ဆင်ရေးစောင့်ကြည့်-အကဲခတ် dial features တွေ, သို့မဟုတ်နောက်ထပ်လက္ခဏာများညွှန်းကိန်းထိထိရောက်ရောက်လည်ပတ်နေတဲ့စက်လည်းမရှိကြောင်းသေချာစေရန်.
စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်မဆိုနှင့် ပတ်သက်. သွားကြဖို့အဘယ်အရာကိုဦးတည်ချက်ရွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ကြောင်းတင်းတင်းပြောတတ်တဲ့၏ troubleshooting-ဆုံးဖြတ်အကြောင်းတရားများ.
လိုအပျသောတူရိယာအသုံးချဖို့ပွငျ-ပွငျစက်တွေသို့မဟုတ် devices များ.
ကုန်စည်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးစာမေးပွဲ-ဖျော်ဖြေစာမေးပွဲနှင့်အကဲဖြတ်, ပံ့ပိုးပေး, သို့မဟုတ်စစ်ဆင်ရေးထိရောက်မှုသို့မဟုတ်အရည်အသွေးကိုအကဲဖြတ်ဖို့.
လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်စနစ်များကိုလုပ်ငန်းစဉ်၏မျိုးလုပ်ဆောင်ရမယ်ဘယ်အရာကိုသုံးသပ်ခြင်း-ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်မည်သို့ပြောင်းလဲ, ပြဿနာများ, အဖြစ်ပတ်ဝန်းကျင်ရလဒ်များကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါ.
ပစ္စည်းနည်းလမ်းများ-လက်ခံခြင်း devices များရဲ့စံပြအသုံးပြုမှုဆီသို့ဦးတည်ခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်၏စီမံခန့်ခွဲမှု, သာယာအဆင်ပြေမှုများ, နှင့်ပစ္စည်းများအထူးသဖြင့်အလုပ်လုပ်ဖို့အလေးအနက်ထားလိုအပ်.
ဝန်ထမ်းရေးရာအရင်းအမြစ်များ-Creating ၏အုပ်ချုပ်ရေး, အားတက်စရာ, သူတို့လည်ပတ်နေချိန်တွင်ပုဂ္ဂိုလ်များလမ်းညွှန်, ကြောင်းအလုပ်အကိုင်အဘို့အထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်အဆုံးအဖြတ်.
High School တွင်အဆင့် (GED သို့မဟုတ်မြင့်မားသော-School တွင်ညီမျှသောလက်မှတ်သို့မဟုတ်)
Connect ကိုရဲ့အဆင့် (သို့မဟုတ်ကွဲပြားခြားနားသော Two-နှစ်ဇာတ်စင်)
အတော်များများကျောင်း Programs ကို
ထက်ပိုပြီး2နှစ်ပေါင်း, မှတက်နှင့်တချို့ရဲ့နှစ်ပေါင်းအပါအဝင်
ဇွဲ – %
စီမံကိန်း – %
အမိန့် – %
အခြားသူများအဘို့ကိစ္စ – %
လူမှု Direction အဖွဲ့ – %
တည်ငြိမ်ခြင်း – %
အသေးစိတ်အာရုံစိုက် – %
နောက်တစ်ခု တန်းကျောင်းသူလေးပြီးတော့ Sorters, စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်များယောဘကိုဖျေါပွခကျြ / တာဝန်တွေပြီးတော့ Duty နမူနာ
ဘတ်ဂျက်လေ့လာသုံးသပ်သူများကယောဘ Duty Template ကို
ပြည့်စုံဘို့လေ့လာမှုဘတ်ဂျက်ခန့်မှန်းချက်, ဟုတ်မှန်ရေး, နှင့်ထိန်းလိုက်နာအပ်သောနည်းစနစ်များနှင့်ကန့်သတ်သုံးပြီး. ဘတ်ဂျက်အကဲဖြတ်ရန်နှင့် …